Ikhaya le-CO2 yee-Aquariums | Ngeentlanzi
El I-CO2 kwi-aquariumKubaluleke kakhulu, kungekuphela kwizilwanyana zethu, kodwa nakwizityalo esinazo echibini. Kungenxa yesi sizathu ukuba namhlanje sifuna ukukubonisa indlela entsha yokuvelisa i-CO2, ngendlela efanelekileyo nehlala ixesha elide. Ukwenza le CO2 yenziwe ekhaya ye-aquariums uyakufuna oku kulandelayo: 1 ibhotile enye enesiqingatha seelitha zesoda, umatshini weserum o-1 ozisa isibhengezo sebhabhalaza kunye nevalve engabuyisiyo, ikomityi yeswekile, imvulophu ye-bicarbonate, a icephe letayi yegwele kunye nekomityi enesiqingatha samanzi ashushu.
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukulungisa i-dropper, yenkqubo, ukwenza umngxunya omncinci kwikepusi kunye nokufaka i-dropper, emva koko kuya kufuneka uyitywine ngesilicone encinci kumacala omabini, ukunqanda naluphi na uhlobo lokuvuza. Kwisitya kufuneka ubeke indebe kunye nesiqingatha samanzi ashushu kunye nekomityi yeswekile, uzama ukunyibilikisa le ndlela yokugqibela ngendlela efanelekileyo. Kuya kwenziwa ijeli ekufuneka uyixube ne nebhiKharbonati.
Kanye a ukuxuba okufanayo, Yibeke ebhotileni uyibeke kwisikhenkcisi kangangeeyure ezininzi, de ibe yomelele ngokwaneleyo. Ndicebisa ukuba uyibeke kwisikhenkcisi ecaleni kwayo ukuze ijeli ikwithambeka kwaye igubungele uninzi lwebhotile.
Xa ijeli ilungile, kusuku olulandelayo, gcwalisa ibhotile ngamanzi afudumeleyo, ushiye malunga neesentimitha ezi-7 zingenanto, ukuze kubekho indawo yokubila. Ngokukhawuleza emva koko, yongeza icephe lemvubelo kwibhotile, uphephe ukugungqisa okanye ukungcangcazela. Yongeza amanzi kancinci kwi-serum kwaye xa sele ilungile, beka ikepusi kwibhotile, uzama ukuyiqinisa kangangoko kwaye uqhagamshele ithumbu ekupheleni kwesefu yokuhambisa Isihluzo sangaphakathi se-aquarium.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » I-CO2 eyenziwe ekhaya yee-aquariums